Horseed iyo heegan oo ciyaar xiiso leh galabta ku leh garoonka Banaadir – Horseed Sports Club
Naadiyada Horseed FC iyo Heegan ayaa galabta ku ballansan garoonka Banaadir ciyaar ka tirsan wareegga koobaad ee horyaalka kubada cagta 2015-16.
Kulanka galabta ayaa noqonaya kii lixaad ee horyaalka, waana kulamadii labaad ee labada kooxood ay ciyaaraan horyaalka, iyadoo Heegan ay kulanki furitaanka horyaalka guuldaro 1-0 kala soo kulantay kooxda Dekedda , halka Horseed ay barbarro 1 -1 isla dhaafi waayeen kooxda Jeenyo.
Labada koox ayaa bishii December ku kulmay laba kulan waxa ayna guushu raacday Horseed, 17 December waxay 2-1 kaga qaadeen koobka Jeneraal Daa’uud,sidoo kale 24 December ayay kale 3-1 kaga guulaysteen koobka Super Cupka dalka.
Kulanka ayaa loogu magac daray kulanka Ciidanka qalabka sida, Heegan waxay matashaa Ciidanka Boolsika , Horseed FC waxey meteshaa ciidanka Xoogga dalka.
Horseed ayaa guulaysanaysay sedexdi kulan ee ugu dambeeyayoo ay la yeelato kooxda Heegan waxeyna taageerayaasha Horseed quud dareeynayaan iney Horseed markale ka guuleeysato Heegan balse an dhowrno natiijada ciyaarta galabta oo ka dhaceeysa garoonka Banaadir.
CATEGORY: BamBayda Muusikada , Boolis Malatariya , Kubada Dhaliska Horseed , Kubada Koleyga Horseed